विराटनगरमा मोदीको तस्वीरमा आगो - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > विराटनगरमा मोदीको तस्वीरमा आगो
May 9, 2020 February 8, 2021 GRISHI182
विराटनगर रानी सिमामा नेपाली युवाहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तस्वीर जलाएका छन् ।
भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने सडक बनाएको बिरोधमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तस्विर विराटनगर रानी सिमा क्षेत्रमा जलाएका हुन् ।
स्वतन्त्र युवा समूह बिराटनगरले शनिबार दिउसो नेपाली भुभागबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नुको सट्टा लिपुलेकसम्म बाटो बनाएको भन्दै बिरोध स्वरुप नारावाजी सहित मोदीको तस्वीर जलाएका हुन् ।
बिराटनगरको रानी १७ भन्सार २ नम्बर ढाट नजिकै स्थानियवासीले भेला भई मोदीको तस्वीर जलाएका हुन् ।
उनीहरुले “भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद” , “नेपाली हामी रहौला कहा नेपालै नरहे ?” , “हाम्रो सिमाना मिचिएको हो कि बेचिएको हो ? सरकार किन मौन?” Go Back India जस्ता नारा लगाउदै केही बेर नाराबाजी गरेका थिए । स्वतन्त्र युवा समुहका अध्यक्ष हमिद आजादको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको Real Stendra generic for sale erectionaprova d’agua! Galas de sunga shows the beauty and potential of Alto Astral Alto Astral कार्यक्रममा राप्रपा नेता मुस्लिम मियाँ सहितको सहभागिता रहेको थियो ।
तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने लिंक रोडको भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो । उद्धाघाटन सँगै नेपालीहरले विरोध जनाउदै आएका छन् भने नेपाल सरकारले पनि एक विज्ञप्ती मार्फत उक्त कार्यको विरोध जनाइसकेको छ ।
यद्यपी आन्दोलन गर्नेहरुले वर्तमान अवस्थामा जारी लकडाउन र सामाजिक दुरीको अवज्ञा गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो ।